हैन साँच्चै, हुन पनि हामी नेपाली के भा’को ? - Samudrapari.com
हैन साँच्चै, हुन पनि हामी नेपाली के भा’को ?
२२६२५ पटक हेरिएको
तसर्थ, अझै समय छ, केही बिग्रिसकेको छैन । बेलैमा हरेक क्षेत्रबाट सबैले सप्रिएर अगाडि बढ्न सकियो भने भोलिका दिनमा जापान आउनेहरुको लागि पनि राम्रो हुने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ । अनुशासन नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । अनुशासनले नै मानिसको वास्तविक परिचय दिन्छ । जापानका अग्रजहरु, यहाँका संघसंस्थाहरु सबैले यी यावत कुराहरुमा बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यति मात्र नभएर हरेक नेपालीले आ–आफ्नो ठाउँबाट आजैदेखि सोचौं । सबैले एउटै कुरा मनन गरौं–‘सके केही गरौं, नसके नबिगारौं’ । होइन भने, नेपालीको इज्जतमा दाग लाग्न अब समय धेरै छैन । अन्तमा फेरि पनि दाेहाेर्याउँछु, यो उनीहरुमा नै समर्पित छ–‘जो जससँग सम्बन्ध छ ।’ अस्तु ।